Ukwenza i-B2B Ukuqagela nokulindela ngeMintigo | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 1, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngemuva kokushiya imboni yamaphephandaba, omunye wemisebenzi yami yokuqala kwakuwukuthuthukisa imininingwane yolwazi lwabathengisi be-B2B. Sisebenzisa amanye amathuluzi avela eceleni, sakhe izindlela zokuthuthukisa inkomba yangokwezifiso kuzimpawu eziqinile kusisekelo seklayenti lakho. Ngamanye amagama, singakhomba amaklayenti akho afanele ngemali engenayo, inani labasebenzi, amakhodi ezimboni, iminyaka esebenza, indawo kanye nolunye ulwazi esingaluthola.
Lapho sesazi ukuthi ikhasimende elijwayelekile libukeka kanjani, besizosebenzisa lawo maphrofayili ukuthola imininingwane yolwazi. Akudingeki ukuthi uze nomentshisi, obekudinga ukukwenza nje wukuhlela uhlu lwabathenjwayo… ababukeka besondele kakhulu njengamakhasimende akho uma kuqhathaniswa nababukeka njengamakhasimende akho. Bekuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe njengoba inkomba nokufakwa kwezinkomba kufaka izinkomba ze-multivariate… kepha lezo yizisekelo.
Kubonakala abantu be- UMintigo bathathe le ndlela, bayisebenzisa kuwebhu, bayifaka kuma-steroids!
The UMintigo uhlu lwamasayithi izizathu ezi-5 zokusebenzisa insiza yabo:
Finyelela Izilaleli Ezifanele - Ulwazi oluphelele nolunembile kubo bobabili abantu nezinkampani likuvumela ukuthi udlule abagcini bamasango futhi uxhumane ngqo nabenzi bezinqumo, ukwenza ngcono ipayipi, isilinganiso sokuvala, nomjikelezo wokuthengisa.
Thuthukisa Ukuphumelela Kwamapayipi - Ukuhola okungaphezulu kweMintigo kuguqukela ekuthengiseni kunakwenye imithombo, kuze kufike kuma-70% okuthengisa ngaphezulu ngosuku, ngokusho kocwaningo lwamakhasimende akwaMintigo.
Ukugeleza Okuholela Okulula, Okungaqagelwa - Kukuthatha imizuzu emihlanu ukugcwalisa umthamo wokuhola wanyanga zonke - vumela uMintigo akwenzele ukuphakamisa okunzima ngokugeleza okungaqondakali kwemikhombandlela eqinisekiswe yiMintigo. Abasebenzi bakho bezokumaketha bangacubungula imikhondo eminingi ngokushesha ngokuzethemba ukuthi ipayipi labo lizohlala ligcwele.
Fushanisa Imijikelezo Yokuthengisa - IMintigo ifaka ukuqonda okuningi kubo bonke oxhumana nabo ngoba ukuhola ngakunye kufana nephrofayili yomthengi wakho ophakeme kakhulu. Imikhombandlela eqinisekiswe yiMintigo iletha emaqenjini okuthengisa imininingwane ayidingayo ekuhleleni ngempumelelo i-akhawunti futhi ivumele abathengisi bangene kuzinjongo zemikhankaso ehlukanisiwe.
Khiqiza ukusakazwa kwemali engenayo okusha - IMintigo ivula amathuba emakethe afihliwe ngokuskena izinkampani ezingaphezulu kwezigidi eziyi-10 ezilindelwe, ukuthola ezihambisanayo kususelwa kuzimpawu ezijulile, kunokuba kube imininingwane elula ye-firmographic. Amakhasimende athole ukuthi kuze kufike ku-90% wokuhola kweMintigo bekukusha kubo - ngisho nasezimakethe sebevele bahlolisisa kahle besebenzisa uhlu.
Sibonga ngokukhethekile kumngani neklayenti u-Isaac Pellerin, iMenenja Yezentengiso kwaTinderBox, ngokungikhombisa le nsizakalo. I-Tinderbox iyi isoftware yokuphakanyiswa kokuthengisa lokho kwenza kube lula kuwe ukudala, ukuhlela nokulandela iziphakamiso zokuthengisa. Siyayisebenzisa futhi siyayithanda!
Tags: b2bisizukulwane esihola phambili se-b2bukucwaningwa kwe-b2bb2b beshayamintigo